मेरो उपहार पसल | डेभिड ब्रिडबर्ग कलाकार
कसरी मेरो उपहार स्टोर खरीद गर्न
सबैको लागि कलाकृति
तपाईं कलामा नयाँ र भिन्न चीज खोज्दै हुनुहुन्छ। यो व्यावहारिक हुनु पर्छ? के तपाई कला बनाउने पूर्ण नयाँ तरीका चाहानुहुन्छ?
मेरो पोष्ट आधुनिक कलामा सौंदर्यशास्त्र समावेश छ जुन तपाईंले आज पहिले कहिल्यै देख्नु भएको छैन।
कलेजमा फिर्ता मैले लाक्षणिक वा अमूर्त कलाकृति उत्पादन नगर्न आफैलाई चुनौती दिएँ। यसको मतलब के हो? म केहि फरक गर्न चाहन्छु। कम्प्युटरहरूले आजका कलाकारलाई म्याक्रो र काममा सूक्ष्म स्तरहरूमा दुई नयाँ तरिकामा अमूर्त गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ।
के यो काम यति फरक बनाउँछ? मेरो विषयको विकल्प। डेरिभेटिभ कलाकारको रूपमा, म प्यारोडी सिर्जना गर्दिन। प्राय: म पूर्ण अद्वितीय तरिकामा धेरै सुन्दर कला टुक्रा सिर्जना गर्दछ।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा तह १ 18 मोनेट
प्रिन्टहरू क्यान्भासेज, फोटोपेप, धातु, एक्रिलिक र काठका रूपमा आउँछन्। डिमांड र माटिting माग अनुसार उपलब्ध छ। संग्रहालय गुणवत्ता सामग्री प्रयोग गरीन्छ।
पात इन्सेटमा मेरो एउटा संस्करण भिन्सेन्ट भ्यान गगको "बदाम ब्लोसम" छ। म मेरा कार्यहरूमा सिर्जना गरेको छविहरूको पुन: प्रयोग गर्छु।
डेभिड ब्रिडबर्ग उर्फ ​​ज्याजडाबारी द्वारा ओरेन्ज रेडमा इलेक्ट्रिक गितार
ज्याजडाब्री, उर्फ ​​डेभिड ब्रिडबर्ग, स्ग्रह एउटा अमूर्त फारमको साथ न्यूनतम रेखा रेखाचित्र विवाह गर्न प्रयोग हो। श्रृंखला चंचल छ। त्यहाँ २१ विभिन्न संगीत वाद्ययंत्रहरू प्रत्येक 21 बिभिन्न र colored्गीन ब्याकड्रपहरूमा आउँदछन्।
श्रृंखला संगीत स्टुडियो, युवा खेल्ने सुरूवात, संगीत शिक्षक र संगीत सराहना गर्नेहरूका लागि हो।
पोस्ट समकालीन संग्रहमा मेरो पशु छविहरू छन्। कुकुर, ब्वाँसो, स्याल, ठूला बिरालाहरू, एक वानर, वालरस र अधिक… .. किन "संगीत नोट x" शीर्षक? यो केवल कलाकारहरू अधिक साधारण चीजहरूको लागि हामी कलाकारहरू "शीर्षक बिना x" मा गर्दछौं।
जबकि समकालीन कला एक वस्तुको रूपमा कामको विषयलाई व्यवसायिक गर्दछ समकालीन कलाकृति वस्तुलाई जीवन दिन्छ। यो मानिसमा एक सामाजिक टिप्पणी हो।
यो अब एउटा प्लास्टिक गुडिया हो। म आफैंलाई सहयोग गर्न सक्दिन जस्तो लाग्छ। म गहिरो जान थियो। LOL
समकालीन संग्रहले श्रृंखलाको प्रगति हुने बित्तिकै विषय बन्नको विकासको खोजी गर्छ।
मेरो ग्राहकहरु लाई धन्यबाद। तपाईं मध्ये एक भन्दा बढि मलाई किनमेल गर्नुभयो, तपाईं मेरो जीवनलाई वास्तविकता बनाउनमा मद्दत गर्नुहुन्छ। तीनै जनाले मलाई पहिलो पटक खोजिरहेका छन्।
म कला भन्दा पहिले भन्दा बढी प्रतिबद्ध छु। भर्खरको क्रिप्टो एनएफटी संसारमा मेरो प्रवेश हो। ढिलो सम्म धेरै कलाकारहरू मनपर्दछ। के म तपाईंलाई वाचा गर्दछु यो मेरो आफ्नै अनौंठो तरीकाले गर्नु हो।
PS, म धुम्रपान गर्ने व्यक्ति होइन, तर ती पातहरूले केही शान्त कलाको लागि बनाउँछन्।